Kuunza mota kubva kuSwitzerland kuenda kuUK | Yangu Mota Kunze
Tumira mota yako kubva kuSwitzerland kuenda kuUnited Kingdom
Uri kutsvaga kuunza mota yako kuUnited Kingdom?
Isu tinonyanya kutakisa mota nemugwagwa munzira dzakazara dzeinishuwarenzi yekutakura, asi zvinogona zvakare kutora kana mota iri kuUK yatove kana iri kuronga kuendesa mota kuUK.
Kana uchipinza mota kubva kuSwitzerland kuenda kuUK, mota dziri pasi pemakore makumi matatu dziri pasi pe30% VAT, kunze kwekunge uri mugari wekuchinjisa uyo akagara kuSwitzerland kweanopfuura mwedzi gumi nemaviri uye anga aine mota kweinopfuura mwedzi mitanhatu.
Motokari dzinopfuura makore makumi matatu ekuberekwa dzinoiswa pasi peyakaenzana ye30% VAT, kunze kwekunge iwe uri mugari wekuchinjisa uyo akagara kuSwitzerland kweanopfuura mwedzi gumi nemaviri uye anga aine mota kweinopfuura mwedzi mitanhatu.
Kuruboshwe ruoko kutyaira mota kubva kuSwitzerland kunoda kumwe kugadziridzwa, kusanganisira izvo kune iyo yemwenje pateni yekudzivirira kupenya kweinouya traffic, iyo spidhi yekuratidzira mamaira neawa kuverenga uye neseri mhute mwenje kana isati yatowirirana pasi rose.
Iyo yakarongedzwa, iri nyore maitiro akave akagadzirirwa pamusoro pemakore mazhinji, kupinza mota kubva kuSwitzerland kuenda kuUK hakugone kuve nyore. Kuti umhanye pane zvaunoda uye uwane zvimwe, taura nesu nhasi pa +44 (0) 1332 81 0442.